फेसबुकमा लेख्न नहुने ९ कुरा के-के हुन् ? – Lokpati.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु प्रचण्ड चितवन अमेरिका अपराध पक्राउ नेकपा राशिफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस
फेसबुकमा लेख्न नहुने ९ कुरा के-के हुन् ?
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Nov 2, 2019
एजेन्सी। क्याम्ब्रिज एनालिटिक प्रकरणले मानिसको दैनिक जीवनमा फेसबुकले खेल्ने भूमिकामाथि प्रश्न गर्‍यो। त्यसैका आधारमा मानिसहरुले आफ्नो फेसबुक खाता नै बन्द गर्न समेत तयार भए। फेसबुक बन्द गरिहाल्नुपर्छ त? पर्दैन।
तर, आफ्नो एकाउन्टलाई सुरक्षित भने राख्नै पर्छ। गोपनीय वस्तुहरु फेसबुकमा राखेका छौं भने त्यसलाई हटाउँदा यो सामाजिक सञ्जाल थप सुरक्षित हुन सक्छ।
‘कश्मिरमा जुन अवस्था छ, त्यो लामो समय रहँदैन’
आज यो बर्षको दोस्रो चन्द्रग्रहण, जान्नुहोस् कुनबेला यो सुरु हुन्छ र कस्तो देखिन्छ?
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि दुखाइ कम गर्ने आइबुप्रोफनको परीक्षण गरिदै